(Sawirro);- Nin Ganacsade Caan ah Dhigtay Xaflad Dhimsho ah Kadib Markii Laga Helay Xanuunka Qatarta ah ee Ku Dhaca.. | Caasimada Online
(Sawirro);- Nin Ganacsade Caan ah Dhigtay Xaflad Dhimsho ah Kadib Markii Laga Helay Xanuunka Qatarta ah ee Ku Dhaca..
Dec 14, 2017 - Comments off
Ganacsade caan ah oo u dhashay dalkaasi Japan islamarkaana lagu magacaabo Satoru Anzaki (80-jir) ayaa xaflad uu kusoo dhoweynayo dhimashadiisa waxa uu ku qabsaday hotel ku yaala magaalada Tokyo kadib markii uu ku dhacay cudurka dilaaga ah ee Kansarka, ayna dhakhaatiirtu u sheegeen in uu dhowaan dhimanayo.
Ogeysiis ayuu waxa uu ku qoray jaraa`idka ka hor xafladda kaas oo uu ugu digayo qaraabada, asxaabtiisa iyo ciddii kale ee taqaana in ay kasoo qeyb galaan xaflad uu ku sagootinayo noloshiisa oo ka dhaceysa hotel ku yaal magaalada Tokyo.
In ka badan kun qof ayaa xafladda kasoo qeyb galay, waxaa uu mr. Satoru uu uga mahadceliyay kasoo qeybgalayaasha wixii ay nolosha iskala soo mareen, waxa ay u qabteen iyo waxa uu isagu u qabtayba.
Ninkan oo gaariga dadka lagu riixo lagu keenay goobta xafladda ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay nolosha uu soo maray iyo waqtiga wanaagsan ee uu soo qaatay Dadka qaar ayaa ku tilmaamay xafladdan mid u eg nin qabsaday xaflad aas isaga oo nool.